Shiinaha 12 Weyn Wejiga Weyn ee Wejiga Maskaxda SW-LC12 Warshadda Hilibka iyo soosaarayaasha | Smart Miisaan
12 Miisaaniyadda Isku-darka Wadnaha ee Wejiga SW-LC12 Hilibka
Waxaa badanaa lagu dabaqayaa qeyb-auto ama auto culeys ah hilib cusub / la qaboojiyey, kalluun, digaag, khudradda iyo noocyo kala duwan oo miro ah, sida hilibka la jarjaray, salaar, tufaax iwm.
Dhismaha: Bir aan xadi lahayn 304
Miisaanka suunka: 10-1500 garaam
Isugeynta culeyska: 10-6000 garaam
Xawaare: 5-40 baako / min
Isbarbar dhig Heerka
5-30 kiish / min
Cabbirka culeyska culeyska
Aruurinta Cabbirka Suumanka
Miisaanka G / N
9.7 "Shaashadda taabashada
220V / 50HZ ama 60HZ; Wajiga Labaad
Waxaa badanaa lagu dabaqi karaa qeyb-auto ama auto-culeys hilib daray ah / la qaboojiyey, kalluun, digaag, khudradda iyo noocyo kala duwan oo miro ah, sida hilibka la jarjaray, salaar, tufaax iwm.
• Suunka miisaanka iyo geynta xirmo, kaliya labo habraac oo wax yar ka xoqida alaabada;
• Inta badan ku habboon dheellitirka iyo jilicsanaanta suunka miisaanka iyo bixinta,
• Dhammaan suumanka ayaa lagu bixin karaa qalab la'aan, nadiifin sahlan kadib shaqada maalinlaha ah;
• Baaxadda oo dhan ayaa lagu hagaajin karaa naqshada iyada oo la raacayo astaamaha alaabada;
• Ku habboon in lagu dhexgeliyo weelka quudinta iyo bacda baakadaha ee isugeynta culeyska iyo xirmada;
• Xawaare aan la koobi karayn oo suumanka oo dhan ah iyadoo loo eegayo muuqaalka alaabta ee kala duwan;
• Auto ZERO oo dhan suunka miisaamaya si aad ugu saxsanaato;
• Suunka aruurinta ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga u ah quudinta saxanka;
• Naqshadeynta kuleylka gaarka ah ee sanduuqa elektarooniga ah si looga hortago jawiga qoyaan badan.
Smart Weigh wuxuu bixiyaa muuqaal 3D u gaar ah (aragtida 4-aad sida tan hoose). Waad ka hubin kartaa mashiinka hore, dhinac, dusha, iyo aragtida oo dhan cabirka. Way iska cadahay inaad garato cabirka mashiinka oo aad go’aansato sida loo dhigo weweherka wershadahaaga.
1. Waa maxay nidaamka kontaroolada casriga ah?
Nidaamka xakamaynta qaybsan waxaa loola jeedaa nidaamka xakamaynta guddiga. Motherboard-ka wuxuu xisaabiyaa sida maskaxda, mashiinka mashiinka kontaroolo mashiinka shaqeynaya. Miisaaniyadda wejiyada leh ee wejiga casriga ah ee 'Smart Weigh' waxay isticmaashaa nidaamka xakamaynta casriga 3-aad. 1 koontaroolka guddiga wadida 1 hipper feed iyo 1 cupper ah. Haddii ay jirto 1 hopper jabtay, ka mamnuuco qoob-ka-baxa shaashadda taabashada. Kuwa kale ee kulul ayaa u shaqeyn kara sidii caadiga ahayd. Iyo guddiga wadistu waxay caan ku yihiin taxanaha taxanaha miisaanka 'Smart Weigh'. Tusaale ahaan, maya. 2 guddi wadis ayaa loo isticmaali karaa maya. 5 guddiga wadayaasha. Waxay ku habboon tahay keydinta iyo dayactirka.
2. Miisaankan miisaankiisu kaliya ma yahay 1 culeys bartilmaameed ah?
Waxay miisaan u noqon kartaa culeysyo kala duwan, kaliya bedel qiyaasta miisaanka shaashadda taabashada. Howl fudud.
3. Mashiinkan dhammaantood ma wuxuu ka samaysan yahay birta birta ka samaysan?
Haa, dhismaha mashiinka, meegaarka, iyo qaybaha xiriirka cuntada dhamaantood waa birta birta ka sameysan ee aan lahayn bir 304. Waxaan haynaa shahaadada ku saabsan, waan ku faraxsanahay inaan kuu soo dirno haddii loo baahdo.
Hore: 4 Head Linear Weigher SW-LW4
Xiga: Mashiinka xawaashka ah ee bacda xajinaya
isku-darka qaab toosan
khudradda miisaan ahaan